Marii fi gamaaggamni haaromsaa milkaa’aa ture – obbo Fiqaaduu Tasammaa
Tuesday, 15 November 2016 09:03
Finfinnee, Sadaasa 5, 2009 (OROMAPO)- Marii fi gamaaggamni haaromsaa hoggansa giddu galeessa waliin taasifamee, hanqina hoggansaarratti mudataa ture adda baasuu fi tarkaanfii sirreeffamaa fudhatamuuf xiinxoon kan itti argamee jedhame
Hoggansa sadarkaa giddu galeessaa waliin haroomsii fi mariin gaggeeffamaa ture rakkinoota hoggansaarratti mudataa turan adda baasuuf kan gargaaran ta’an Biiron Dhimmoota Koomuniikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa ibseera.
Hogganaan biirichaa obbo Fiqaaduu Tasammaa Faanaa Broodkaastiing Koorporeetitti akka himanitti, haroomsi hoggansa giddu galeessaa magaloota Oromiyaa kanneen akka Jimmaa, Naqamtee, Shaashamannee, Hararii fi Adaamatti ta'amaa turan dhimmootni ka'aa turan jijjiirama yaadamee fiduuf galteen kan itti argamee ta’uusaa himan.
Keessumaa hanqinootni kenna tajaajilaa hoggansarratti mudataa turan marichaan ifatti kan adda ba’anii fi tarkaanfii sirreeffamaa fudhatamuuf xiinxoon kan itti argameedha jedhan obbo Fiqaaduun.
Akka obbo Fiqaadurraa odeeffannetti, haaromsa jiruun gamaaggamaa fi marii ummataa waliin taa'amuun qaama rakkoo qabuu kan ga’umsa qabuun bakka buusaa jijjiirama qabatamaa ummanni irraa fayyadamu galmeessisuuf kan hojjatamu ta’a jedhan.
Sadaaasa 6 irraa eegalee hoggansa sadarkaa duraa kuma 8 ta’an walii aanaalee Oromiyaa keessatti mariin gamaaggamaa fi haaromsi kan itti fufu ta’uusaa hoogganaan Biroo Dhimmoota Koomuniikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa Faanaa Broodkaastiing Koorporeetitti himaniiru.
Finfinnee, Sadaasa 5, 2009 (FBC)- Marii fi gamaaggamni haaromsaa hoggansa giddu galeessa waliin taasifamee, hanqina hoggansaarratti mudataa ture adda baasuu fi tarkaanfii sirreeffamaa fudhatamuuf xiinxoon kan itti argamee jedhame.
More in this category: « Atleet Haayilee Gabrasillaasee Pireezdaantii Federeeshinii Atleetiksii Itiyoophiyaa ta’ee filatame Jiddu galli waggaatti xaa’oo meetriik toonii miiliyoona 2.6 oomishu ijaarramuufi »
Torbe Kana 1670
Ji'a Kana 1670
01/05/07 irraa eggalee 3422841